नेपालमा जग्गाको मुल्य ह्वात्तै घट्ने सम्भावना ! यस्तो छ मुल्य घट्नुको कारण – – Life Nepali
नेपालमा जग्गाको मुल्य ह्वात्तै घट्ने सम्भावना ! यस्तो छ मुल्य घट्नुको कारण –
कालोधनले जग्गाकारोबार गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेहरुका लागि सरकारले नयाँ नियम लगाएसँगै जग्गाको कारोबारमा ब्रेक लाग्ने भएको छ । बैंकहरुमा गो–एएमएल प्रणाली लागू भएपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै घट्ने भएको हो । नयाँ नियम अनुसार चेक वा नगद जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा विवरण खुलाउनुपर्ने छ । जग्गाको किनबेच भएको वास्तविक मूल्य देखाउनुपर्ने भएपछि जग्गाको भाउ घट्ने भएको हो । नयाँ प्रणाली अनुसार बैंकहरुमा रकम जम्मा गर्दा तीनपुस्ते सहित आम्दानीको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले १ माघ देखि ‘गो–एएमएल’ मा गएका छन् ।
जनबोली बाट साभार
Previous आज फेरि घट्यो सुनको मुल्य ! कति पुग्यो ? तोलामा हेर्नुहोस !
Next फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य ! तोलामा कति पुग्यो ? हेर्नुहोस !